Fahalalana fitaovana |
Tandremo ny zezika biolojika
Ny fampandrosoana ny fambolena maintso dia tsy maintsy mamaha aloha ny olan'ny fandotoana ny tany. Ny olana mahazatra amin'ny tany dia ny: fitambaran'ny tany, ny tsy fifandanjana ny tahan'ny otrikaina mineraly, ny votoatin'ny organika ambany, ny fambolena ambany, ny asidra-tany, ny fanamasinana ny tany, ny fandotoana ny tany sns. Hanamboatra t ...
Inona avy ireo karazana zezika mitambatra
Ny zezika mitambatra dia manondro farafahakeliny roa amin'ireo otrikaina telo an'ny azota, fosforôra, ary potasioma. Izy io dia zezika simika vita amin'ny fomba simika na fomba ara-batana sy fomba fampifangaroana. Fomba fanamarihana atiny fitehirizam-bokin'ny nitroka, phosforus, ary potasioma: phitrorôzena (N) (P ...
Fametrahana milina goavam-be karazana Type Wheel Compost Turner
tamin'ny admin tamin'ny 2021-07-05
Machine Type Composting Turner Machine dia fitaovana fanaovana composting sy fermentation mandeha ho azy miaraka amin'ny halavany sy ny halalin'ny zezika, ny fotaka ary ny fako, ny fotaka fanivanana, ny mofomamy maloto ambany ary ny famoahana mololo ao amin'ny famiazana siramamy, ary be mpampiasa koa amin'ny fanamasinana sy ny tsy fahampian-drano amin'ny organika. ..
Dingana famokarana zezika marobe
Ny zezika mitambatra, fantatra ihany koa amin'ny zezika simika, dia manondro zezika misy otrikaina misy singa roa na telo amin'ny zezika, azota, phosorea ary potasioma novolavolain'ny fihetsiky ny simika na ny fomba fampifangaroana; zezika mitambatra dia mety ho vovoka na granular. Ny zezika mitambatra ...
Fitaovana famokarana feno ho an'ny zezika biolojika
Ny andiam-pamokarana zezika biolojika feno dia misy amin'ny ankapobeny: fitaovana fermentation, fampifangaroana fitaovana, fitaovana fanosehana, fitaovana granulation, fitaovana fanamainana, fitaovana fampangatsiahana, fitaovana fizahana zezika, fitaovana fonosana, sns.
Zezika vita amin'ny zezika kisoa fitaovana feno
Ny fisafidianana akora azo zezika zezika kisoa sy zezika biolojika dia mety ho zezika isan-karazany sy fako biolojika. Ny fomba mahazatra amin'ny famokarana dia miovaova arakaraka ny karazany sy ny akora. Ny andiam-pambolena zezika voan-kisoa feno dia mazàna ahitana ...
Fitaovana famokarana zezika voajanahary
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-06-29
Ny safidin'ireo akora ilaina amin'ny zezika biolojika sy zezika biolojika dia mety ho zezika isan-karazany sy fako biolojika. Ny fomba mahazatra amin'ny famokarana dia miovaova arakaraka ny karazany sy ny akora.
Drafitra famokarana zezika voajanahary
Ny safidin'ireo akora ilaina amin'ny zezika biolojika sy zezika biolojika dia mety ho zezika isan-karazany sy fako biolojika. Ny fomba mahazatra amin'ny famokarana dia miovaova arakaraka ny karazany sy ny akora. Ny akora fototra dia: zezika akoho, zezika gana, zezika gisa, zezika kisoa, saka ...
Teknolojia fanamasinana zezika organika zezika
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-05-25
Mihamaro ihany koa ny toeram-piompiana lehibe sy kely. Mandritra ny filan'ny hena an'ny olona dia mamokatra tain'omby sy akoho amam-borona betsaka koa izy ireo. Ny fitsaboana ara-dalàna ny zezika dia tsy vitan'ny famahana ny olan'ny fandotoana ny tontolo iainana, fa koa ny fako. Weibao dia miteraka ...
Teknolojia fanamobiana zezika zezika
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-05-18
Drafitra famokarana zezika biolojika
Ny tetik'asa ara-barotra amin'ny zezika biolojika ankehitriny dia tsy vitan'ny mifanaraka amin'ny tombony ara-toekarena fotsiny, fa koa mifanaraka amin'ny fitarihan'ny politika momba ny fambolena sy ny tontolo iainana sy ny maitso. Anton'ny tetik'asa famokarana zezika biolojika Ny loharanon'ny fahalotoan'ny tontolo iainana fambolena: ny ...
Teknolojia fanamasinana zezika zezika omby